उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा सहनलाल प्रधान विजयी
माघ २ ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा सहनलाल प्रधान विजयी छन् । प्रधान ३ सय ४३ मतान्तरका साथ अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् ।
मतगणनामा प्रधान १४८९ मतका साथ अध्यक्षमा विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राजु श्रेष्ठले ११४६ मत प्राप्त प्राप्त गरे । त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुननारायण श्रेष्ठ १६१९ मतका साथ विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विष्णुप्रसाद कँडेलले १०१८ मत गरे ।
यसैगरि वाणिज्य तर्फको उपाध्यक्षमा इ. भोजराज कौडेल १४७६ मतका साथ विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी विपिन रामुदामु ११५९ं मत प्राप्त गरी पराजीत भए । उद्योग तर्फको उपाध्यक्षमा समुनकुमार श्रेष्ठ १४१३ मतका साथ निर्वाचित छन् । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नविन कँडेलले १२१९ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै वस्तगुत तर्फको उपाध्यक्षमा चिरञ्जीवी सुवेदी १४६१ मतका साथ निर्वाचित भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी राजेन्द्र कँडेलले ११६४ मत प्राप्त गरे ।
त्यसैगरि उद्योग तर्फको कार्यसमिति सदस्यहरुमा अशोक अधिकारी १९१०, सोमप्रसाद काप्री १६८०, सिद्र्धालाल चुके १६३७, इ. कृष्णप्रसाद रिजाल १४६१, चन्द्रमणी सापकोटा १४१३, रोहितकुमार श्रेष्ठ १४२५ मतका साथ निर्वाचित भएका छन् ।
यस निर्वाचनबाट सहन प्रधान प्यानलका पदाधिकारीसहितका बहुमत सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
पाँचौं खिचरा महोत्सव सोमबार ३० हजार दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरे
माघ १ ।
थारु समुदायहरुको महान् चाड माघी (खिचरा)को अवसरमा आयोजित ‘पाँचौं खिचरा महोत्सव २०७४’ अन्तरगत सोमबार माघी पर्वका दिन उल्लेखीय दर्शक उपस्थिति भएका छन् । सोमबार माघीका दिन भएकाले पनि एकै दिन करिव ३० हजार दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरेको महोत्सव मुल समारोह समितिका संयोजक नारायणप्रसाद महतोले जानकारी दिनुभयो । सोमबार महोत्सव स्थल प्रवेश गर्न दर्शकहरु लाईन बस्नु परेको थियो । चर्चित गायिका मिलन अमात्य र गायक मनोज महतो र ¥यापर आरके चौधरीले दर्शक झुमाएका थिए । गायिका अमात्यले बट स्लो ली..गाला रातै गाला रातै...लगायत बोलका आधा दर्जन बढि गीत गाउँदै दर्शक झुमाए भने गायक मनोज महतोले थारुगीतसंगै नेपाली गीत नक्कली रैछौलगायत बोलका आधा दर्जन गीत प्रस्तुत गर्दै दर्शक झुमाए । गायक महतोलाई ¥यापर आरके चौधरीले साथ दिए । यस्तै सोमबार अन्तिम समयमा नेपाली चलचित्र ‘लालपुर्जा’का कलाकार सौगात मल्ल र विपिन कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो । थारु कल्चरका साथै रत्ननगर डान्स ऐकेडेमी र डार्क ऐकेडेमीलगायतको साँस्कृतिक प्रस्तुती रहेको थियो । महोत्सव अन्तरगत मंगलबार युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै नेटिभ ब्याण्ड, क्रोमेटिक ब्याण्ड र स्थानीय हास्य कलाकारहरुको प्रस्तुतीसंगै अन्य साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने साँस्कृतिक समितिका संयोजक जयश चौधरीले जानकारी दिए । यस्तै महोत्सव अन्तरगत अन्तर विद्यालय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता हुने प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक कारी महतोले जानकारी दिनुभयो । “राष्ट्रिय एकता र विविधता हाम्रो शान बहुजाति, भाषा, सँस्कृति नेपालको पहिचान” भन्ने नारासहित जारी खिचरा महोत्सव माघ ८ गतेसम्म खैरहनी नगरपालिका–५ स्थित जनकौली गौचरनमा चल्नेछ । थारु कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नं.७ ले थारु सँस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको महोत्सवमा प्रतियोगितात्मक थारु साँस्कृतिक घरेलु हस्तकला प्रदर्शनी राखिएको छ । महोत्सवमा २ सय बढि स्टलहरु रहेका छन् । महोत्सवमा आउने दर्शकहरुको टिकटमा ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बम्पर उपहार स्वरुप पलङ राखिएको छ भने प्रत्येक ५० रुपैयाँको टिकटमा २५ रुपैयाँ बराबरको एक थान पल्पी जुस उपहारको व्यवस्था गरिएको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक कारी महतोले जानकारी दिनुभयो ।
महोत्सवमा आकर्षणको रुपमा थारु जतिको मूख्य खानाको परिकार मध्येको ‘घोङघी’ र ‘चिचर’को ५ फिटको विशाल मूर्ती प्रदर्शनमा राखिएको छ । महोत्सवमा २ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकले लक्ष्य लिएको छ भने करिव १० करोडको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको उद्योग तर्फ कार्यसमिति सदस्यहरुको टुंगो लाग्यो
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको उद्योग तर्फ कार्यसमिति सदस्यहरुको टुंगो लागेको छ । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आइतबार भएको निर्वाचनको मतगणना अहिले जारी रहेको छ । उद्योग तर्फ कार्यसमिति सदस्यमा अशोक अधिकारी, इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद रिजाल, चन्द्रमणि सापकोटा, रोहितकुमार श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । त्यस्तै उद्यँेग तर्फ कार्यसमितिमा सिद्धार्थलाल चुके र सोम प्रसाद काप्रि निर्वाचित भएका छन् । कार्य समितिमा निर्वाचित हुने सदस्यहरुमा प्रधान प्यानलका ५ जना रहेका छन् भने श्रेष्ठ प्यानलका १ जना विजयी भएका छन् । वाणिज्यतर्फ कार्यसमिती सदस्यको मतगणना भने अहिले भईरहेको छ । वाणिज्य तर्फ पनि प्रधान प्यानल अगाडी देखिएको छ । यस्तै महिला तर्फ कार्यसमिति सदस्यमा प्रधान प्यानलकी रजनी मास्के विजयी भएकी छन् । मास्केले राजु श्रेष्ठ प्यानलकी सुलोचना श्रेष्ठलाई ७ सय ८४ मतान्तरले पराजित गरेकी हुन् । यसैबिच वस्तुगत तर्फका चार कार्यसमिति सदस्यहरूको टुंगो लागेको छ । वस्तुगत तर्फ निर्वा्चित हुने सदश्यहरुमा शिव ओझा, बिकाश थापा, दीपक पौडेल र किरण खनाल रहेका छन् । कुल २ हजार ८ सय ५६ मतदाता मध्य २ हजार ७ सय ४७ मत खसेको थियो । संघको अध्यक्षमा पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहनलाल प्रधान र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठबिच तिव्र प्रस्तिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
रत्ननगर नगरपालिकालाई माघ दोस्रो साता भित्र पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिने
रत्ननगर नगरपालिकालाई माघ दोस्रो साता भित्र पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिने भएको छ । नगर भित्रका सबै बालबालिकालाई सबै प्रकारका खोप लगाएको सुनिश्चित गरी रत्ननगरलाई पूर्ण खोपयुक्त नगर घोषणा गर्ने तयारी गरिएको हो । पूर्वखोप घोषणाका लागि गर्नुपर्ने बाँकी काम र भएका प्रगतिको बारेमा छलफल गर्न नगरस्तरीय गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शिवप्रसाद घिमिरेले नगरको स्वास्थ्य अवस्था, भएका प्रगति र पूर्ण खोपयुक्त घोषणाको लागि गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा जानकारी दिए । नगर भित्रका सबै बालबालिकाले सबै प्रकारको खोप पाइसकेको र त्यसको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने काममात्र बाँकी रहेको उनले बताए । अब वडास्तरबाट नगरपालिकामा तथ्याङ्क आउने काम मात्र बाँकी रहेको बताए । मेयर नारायण वनले नगरलाई छिट्टै पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका घोषणाको लागि तदारुकताका साथ काम गर्न स्वास्थ्य शाखा तथा वडास्तरका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे । उनले पूर्णखोप घोषणापछि नगरलाई सुरक्षित मातृत्व नगर घोषणा गरिने जानकारी दिए । उपमेयर विमला दुवाडीले स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सूचकहरु पूरा गर्ने गरी काम गरेर नगरलाई पूर्णखोपयुक्त घोषणा गर्दा दीगो हुने बताइन् । कार्यक्रममा नगरपालिकाका सीअहेब अधिकृत ईन्द्रलाल न्यौपानेले रत्ननगर नगरपालिका भित्र एक वर्ष मुनिका एक हजार ७३४ जना बालबालिका रहेको र ती सबै बालबालिकाले सबै प्रकारको खोप लगाएको सुनिश्चित भएको बताए ।
देवघाटको माघे संक्रान्ति मेलामा भक्तजनको घुइँचो
९ सुत्रिय माग पुरा गर्न दवावस्वरुप एक घण्टे धर्ना
माघ २ । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा सहनलाल प्रधान विजयी छन् । प्रधान ३ सय ४३ मतान्तरका साथ अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । मतगणनामा प्रधान १४८९ मतका साथ अध्यक्षमा विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राजु श्रेष्ठले ११४६ मत प्राप्त प्राप्त गरे । त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुननारायण श्रेष्ठ १६१९ मतका साथ विजयी भएका छन्...
माघ १ । थारु समुदायहरुको महान् चाड माघी (खिचरा)को अवसरमा आयोजित ‘पाँचौं खिचरा महोत्सव २०७४’ अन्तरगत सोमबार माघी पर्वका दिन उल्लेखीय दर्शक उपस्थिति भएका छन् । सोमबार माघीका दिन भएकाले पनि एकै दिन करिव ३० हजार दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरेको महोत्सव मुल समारोह समितिका संयोजक नारायणप्रसाद महतोले जानकारी दिनुभयो । सोमबार महोत्सव...
माघ १ । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको उद्योग तर्फ कार्यसमिति सदस्यहरुको टुंगो लागेको छ । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आइतबार भएको निर्वाचनको मतगणना अहिले जारी रहेको छ । उद्योग तर्फ कार्यसमिति सदस्यमा अशोक अधिकारी, इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद रिजाल, चन्द्रमणि सापकोटा, रोहितकुमार श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । त्यस्तै उद्यँेग तर्फ...
माघ १ । रत्ननगर नगरपालिकालाई माघ दोस्रो साता भित्र पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिने भएको छ । नगर भित्रका सबै बालबालिकालाई सबै प्रकारका खोप लगाएको सुनिश्चित गरी रत्ननगरलाई पूर्ण खोपयुक्त नगर घोषणा गर्ने तयारी गरिएको हो । पूर्वखोप घोषणाका लागि गर्नुपर्ने बाँकी काम र भएका प्रगतिको बारेमा छलफल...
2066 Melrose Street